I-Welding yinkqubo yokudibanisa imiphezulu ngokuthambisa ngobushushu. Xa i-welding thermoplastics, elinye lamacandelo aphambili zizinto ngokwazo. Okwangoku ukuba i-welding yeplastiki ibijikeleze abantu abaninzi abasaziqondi iziseko, nto leyo ibaluleke kakhulu kwi-weld efanelekileyo. Inani kwi ...
Ngaba umbhobho we-PE ulungele ukusetyenziswa kwamanzi okusela?
Iinkqubo zemibhobho ye-polyethylene zisetyenziswe ngabaxumi bethu kunikezelo lwamanzi okusela okoko baziswa ngoo-1950. Icandelo leplastikhi lithathe uxanduva olukhulu ekuqinisekiseni ukuba iimveliso ezisetyenziswayo azichaphazeli umgangatho wamanzi. Uluhlu lweemvavanyo olwenziwe kwimibhobho ye-PE n ...
Iimpawu ezenza imibhobho yeHDPE ilungele izisombululo zonikezelo lwamanzi
Imibhobho ye-HDPE ineempawu ezininzi ezenza ukuba ibe yinto efanelekileyo yokuhambisa amanzi. Ukusuka ekungcwabeni ngokuthe ngqo, ukutyibilika kombhobho osele ukhona ukuya kwicala lokungqengqa, amandla edibeneyo kumbhobho we-HDPE kunye nokuhamba kwexesha elide kuyenza ukuba ilungele ukufakelwa okuninzi ...